Akukho mntu uyikhathaleleyo malunga neBhlog yakho! | Martech Zone
NgoLwesithathu, Matshi 14, 2007 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 Douglas Karr
Yonke imihla ndifumana ubuncinci ukubetha malunga nebhlog yam. Andikhubeki. Ndicinga kum, "yinto yeblogger, ngekhe uyiqonde".
Inyani yile yokuba ndinentlonipho enkulu kwiibhlog kunokuba ndingazenzi ii-blogger. (Nceda uqaphele ndathi 'inkulu' inhlonipho. Khange nditsho ukuba andibahloniphi abantu abangabhlogi.)
Iiblogi zabelana ngolwazi ngokukhululekileyo.
Iiblogi zicel 'umngeni ukucinga okuqhelekileyo.
Iibhlog zifuna ulwazi.
Iibhlogi zinesibindi, zivulela ukugxekwa okukhulu nangokukhawuleza.
Iibhlog zidibanisa abantu abanesidingo kunye nabo banesisombululo.
Iibhlogi zilandelela inyani ngenkani.
Iibhlog ziyabakhathalela abaphulaphuli bazo.
Ke, ungandihleka kwaye uhleke ibhlog yam. Ndiyayithanda intengiso yam kunye netekhnoloji yomsebenzi kwaye ndiyakuthanda ukubhloga ngayo yonke into endiyifundileyo. Ndinokhangelo olungacimekiyo lolwazi nothando xa ndifumana okanye ndidlulisa loo ntwana yolwazi isombulula ingxaki yomntu.
Ndixhalabile ngabantu abangabuthandiyo ubugcisa babo. Ngokukhawuleza emva kwe-5PM, aba bantu bayaphuma, bacime bagoduke. Ihlabathi liyatshintsha macala onke kubo, ukhuphiswano luyenyuka, ubuchwepheshe obutsha buvulelwa kwihlabathi kodwa abanamdla. Bagoduka ngokungathi bemba umngxunya emhlabeni umntu athabathe umhlakulo wabo. Ungalucima njani ulwazi kunye nobuchule njengokutshintsha kwesibane?
Ulawulo, ubunkokeli, uphuhliso, imizobo, uyilo lomsebenzisi, ukusebenziseka, ukuthengisa - yonke le yimisebenzi efuna ukufunda ukwakha impumelelo. Ukuba awunomdla kubugcisa bakho okanye kwishishini lakho, awunamsebenzi - unawo nje umsebenzi. Andifuni ukusebenza nabantu abanomsebenzi. Ndifuna ukusebenza nabantu abafuna ukutshintsha umhlaba.
Ndiqaphele ukuba iinkokheli ezithanda ukukhokela zikwakhokela kwiCawe yabo, kwikhaya labo, nakusapho lwabo. Abaphuhlisi abathanda ubugcisa babo baphuhlisa izisombululo ngexesha labo lokuzonwabisa. Abazobi bemizobo bakha iiwebhusayithi ezintle kwaye benza umsebenzi wokuzimela. Abaqulunqi boMdibaniso womsebenzisi bazama usetyenziso kwaye bafunda iimpapasho zamva nje. Ukusebenza kweengcali zihlala zifunda kwaye zijonga iziphumo zophando lwamva nje. Abathengisi bahlala benceda abahlobo babo ngamashishini abo. Ayisiyo msebenzi wakhe nawuphi na kwaba bantu, luthando lwabo kunye nobomi babo.
Oko akutsho ukuba kuthatha kude nosapho okanye ulonwabo. Aba bantu banayo yonke into abayifunayo kwaye bonwabile ngobomi babo. Njengoko ndifunda iiblogi, ndiyabona ukuthanda ukuba ezi blogger zifake kubugcisa babo kwaye ndiyazihlonipha. Ndingavuma! Kodwa ndiyabahlonipha.
Namhlanje ndifumene inqaku eliphuma ku Mark Cuban Ukuphendula ingxelo endiyibeke kwibhlog yakhe. Kwakufutshane -ukuqina okuqinisekileyo kumagqabantshintshi endiwathumele kwindawo yakhe. Ndiyakucaphukela ukumthanda lo mfo, kodwa andikwazi ukususa amehlo am kwizithuba zakhe. Unoburhalarhume, uphikise, kwaye mhlawumbi andivumelani nayo yonke into ayithethayo. Kodwa ndiyayithanda inzondelelo yakhe kwaye ndicinga ukuba kungangakholeleki ukusebenza nomntu onje.
Kulungile, intanda-bulumko eyaneleyo… masigqibezele oku kwinqaku elonwabileyo. Ukuba bendiya kuyila i-t-shirt, yile nto ibinokubonakala ngathi:
tags: bloggerkublogaakukho mntu khathalayoakukho mntu uyikhathaleleyo ibhlog yakho
Mar 14, 2007 ngo 10:39 PM
Itshiwo kakuhle. Ndisembindini wokuqokelela izicelo zokuvula umsebenzi ndifumanise ukuba omnye wemibuzo yokuqala endiyibuzayo ngowokuba, “ingaba lo mntu unayo iblogi okanye iwebhusayithi? Abo benzayo kwaye babonise uhlobo oluthile lothando lwento abayenzayo bema ngaphezu kwabo bangenabo ubukho bewebhu.
Kodwa ke, ndinecala kakhulu 🙂
Mar 14, 2007 ngo 11:01 PM
Nangona abanye abantu bebengayi kuqonda, inokuba yinto ehlekisayo ukuba ihempe ibinokuthi: -Ilogo yeApple apha- + Blog != Intombi. 🙂
Mar 15, 2007 ngo 12:47 PM
Mar 15, 2007 ngo-9: 22 AM
Doug, ndiyayikhathalela ibhlog yakho.
Mar 15, 2007 ngo-9: 21 AM
Isithuba esihle. Bendingakwazi ukuvuma yonke into oyithethayo. Ngoku kufuneka ndiyeke “umsebenzi” wam.
Sterling "Chip" uCamden
Mar 15, 2007 ngo 1:36 PM
Ndiyayikhathalela ibhlog yakho, nam, Doug.
Ngamanye amaxesha abantu ababonakala bekrelekrele kwaye banomdla abafuni kubhloga. Ndilinde nje ngomonde ukuba babone ukukhanya.
Mar 15, 2007 ngo 9:19 PM
Enkosi ngenkuthazo guys! Ndiyazithanda iiblogi zakho, nam!
Mar 16, 2007 ngo-2: 15 AM
Ndiyathemba ngokwenene ukuba uya kwenza isikipa ngombono wakho (ungasebenzisa i-cafepress okanye i-spreadshirt?).
Kwaye ngelixa ukuyo, nceda inguqulo yesoka nayo!
Endinokuyithetha kukuba bubukrelekrele obusulungekileyo!
Kungekudala iza kuba yiblogger yexesha elizeleyo, ihambisa wonke umxholo kwi-wordpress…
Mar 16, 2007 ngo-7: 08 AM
Intlonipho enkulu 2 u. Ndifunde ibhlog yakho, nangona .. :-)
Mar 17, 2007 ngo-7: 48 AM
Doug, ndimtsha kwihlabathi lebhlog, kodwa ndifumene uqhagamshelo oluninzi kunye nokwabelana okuvulekileyo ngexesha elifutshane kwaye ndimangaliswe.
Ukuqwalaselwa okukhulu malunga nothando.
Mar 17, 2007 ngo-9: 30 AM
Enkosi ngezimvo kwaye wamkelekile kwiblogi! Yitekhnoloji emangalisayo, eguqukayo. Ndirhalela ukubona ukuba isise phi.